Barashada Caadifadeed ee Bulsheed - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Nolosha Ardayga >
Carruurta dareema jacayl iyo badbaado inay si fiican wax u bartaan
Dhammaanteen waxaan ku saabsan nahay jabinta caqabadaha iyo duminta caqabadaha si ilmo kasta uu u helo fursad uu ku iftiimiyo. Macallimiinteenna daryeelka iyo shaqaalaheennu waxay ka gudbaan tacliinta si ay sidoo kale diiradda u saaraan jir ahaanta, bulshada iyo shucuurta fayoobaanta arday kasta. Waxaan abuuraynaa xiriiro macno leh oo udhaxeeya caruurta iyo dadka waaweyn, waxaan kaa caawinaa abuurida dhaqanno caafimaad leh, waxaanan ka caawinaa ardayda inay xiriir wanaagsan la yeeshaan shaqaalaha iyo ardayda fasalka.
Diirada aan saareyno fayoobaanta shucuurta ardaydeena waxay kadhigeysaa Stillwater hogaamiye dhamaan degmooyinka kale ee iskuulada ee gobolka oo dhan.
Qaab-dhismeedka Barashada Dareenka Bulshada
Heer kasta, waxaan ardayda siineynaa fursado ay ku dhisaan xiriiro kuna xirmaan macalimiintooda iyo asxaabtooda siyaabo macno leh. Waxaan aaminsanahay in aan waxbarno cunuga oo dhan lana abuuro jaaliyado waxbarasho oo adag.
Fasalka Ka Jawaabta: Waa barnaamij maalinle ah oo diiradda saaraya Barashada bulshada-shucuurta (SEL) iyo guusha waxbarashada. Barnaamijkani wuxuu mudnaanta siiyaa cilaaqaadka iyo dareenka lahaanshaha ee arday kasta. Ardaydu waxay bilaabaan maalin kasta in si shaqsiyan loo salaamo oo ay qayb ka yihiin Kulan Subax. Waxay sidoo kale ku dhammeeyaan maalintooda dhammaantood iyagoo wada socda Kulan Xidhitaan.
Talaabooyinka Labaad: Barnaamijka Barashada Cilmiga Bulshada (SEL) ee ardayda siiya qalab ay ku guuleystaan ama uga baxaan fasalka. Waxay ka caawisaa ardayda inay horumariyaan xirfadaha maaraynta shucuurta, xirfadaha bulshada iyo wacyiga xaaladaha, iyo gaaritaanka tacliinta. Waxaa kale oo ka mid ah barnaamij ka hortagga xoogsheegashada oo ardayda lagu barayo inay aqoonsadaan, ka hortagaan, soona sheegaan xoogsheegashada.
Shaqaalaha Taageerada: U doodayaasha ardayda (shaqaalaha bulshada ee ruqsada haysta), Shaqaalaha Adeegyada Caafimaadka, Cilmi-nafsi yaqaanka Dugsiga, Dhakhaatiirta Caafimaadka Maskaxda ee shatiyeysan
Kooxaha Taageerada Barashada: Kooxaha shaqaalaha taageerada, macalimiinta, iyo maamulka ayaa kulmaya si looga wada hadlo ardeyda bulshada, shucuurta iyo samaqabka tacliimeed. Waxay soosaaraan qorshooyin taageero ah ardayda sida loogu baahdo.
Qolalka Cagaaran: Qolalka Cagaaran waxay ardayda siiyaan meel aamin ah oo ay aadaan markay dareemayaan walwal ama ay ku dhibtoonayaan inay maareeyaan dhaqankooda. Ardaydu waxay aadaan qolka, oo ay ka shaqeeyaan shaqaale xirfadlayaal ah oo tababaran, si ay u dajiyaan jirkooda iyo shucuurtooda, xalliyaan dhibaatada, u helaan xal, ayna u horumariyaan qorshe ay ugu laabtaan waxbarashadooda.
Naqshadeynta Kobcinta: Barnaamij talo-bixin maalinle ah oo loogu talagalay dhammaan ardayda oo ka caawisa iyaga inay dhisaan oo ay horumariyaan xirfadaha iyo ka-qaybgalka saddex qaybood oo muhiim u ah nolosha dugsiga: bulshada-shucuurta, xiriirka iyo bulshada, iyo tacliinta. Ardaydu waxay ku kulmaan kooxahooda la talinta sanad dugsiyeedka oo dhan waxayna leeyihiin isla lataliye weyn.
WEB (Meel Qof Walboo Ka Leh Yahay): Dhamaan ardayda fasalada 6aad & 7aad waxaa lagu soo dhaweynayaa dugsiga dhexe iyadoo loo marayo barnaamijka kala guurka. Barnaamijkani wuxuu tababaro lataliyeyaal ka socda Fasalka 8aad si ay u noqdaan Hoggaamiyeyaasha WEB. Iyagoo ah kudayasho wanaagsan, waxay lataliyaa kuna hagaan ardayda darajada si ay ugu guuleystaan kala-guurka iyo khibrada dugsiga dhexe. Waa barnaamij muddo sanad ah soconaya oo ka kooban afar qaybood: Hanuuninta Dugsiga Sare, Wax-barashada Tacliinta Sare, La-socoshada Bulshada, La-Xiriirka Hogaamiyaha Bilowday. Waxay sidoo kale u adeegtaa inay tahay barnaamij ka soo horjeedka xoogsheegashada iyadoo tababaraysa Hoggaamiyeyaasha WEB si ay u raadsadaan dhaqanka xoogsheegashada oo ay u joojiyaan una soo sheegaan.
Barnaamijka La-Taliyaha Lataliyaha: La-taliyayaasha dugsiga dhexe waxay la kulmaan macalimiinta dugsiga hoose si ay uga caawiyaan barashada ardayda u wareegaya dugsiga dhexe. Waxay sidoo kale la kulmaan ardayda fasalada si ay u horumariyaan cilaaqaadka ayna uga caawiyaan ardayda inay dareemaan isku xirnaan iyo inay diyaar u yihiin inay galaan dugsiga dhexe.
Xuduudaha Dhallin-yarada Geesinimada: Maalin ku dhiirrigelisa ardayda inay raacaan qalbiyadooda halkii ay ka raaci lahaayeen dadka badan, si loo ogaado cabsida shakhsiga ah loona fahmo in qof walbaa haysto, oo ay ka go'an tahay inaad weydiiso dhiirranaan si aad uga dhigto dugsigaaga meel wanaagsan, iyo inuu xiriir qoto dheer la yeesho ardayda fasalka dhigata hoos u dhig caqabadaha bulshada.
Shaqaalaha Taageerada: La-taliyeyaasha Dugsiga ,, Shaqaalaha Adeegyada Caafimaadka, Cilmi-nafsiyadeedka Dugsiga, Dhakhaatiirta Caafimaadka Maskaxda ee shatiga leh
Kooxaha Taageerada Ardayda: Kooxaha shaqaalaha taageerada, macallimiinta, iyo maamulka ayaa kulmaya si looga wada hadlo wanaagga bulshada, shucuurta iyo ladnaanta ardayda. Waxay soosaaraan qorshooyin taageero ah ardayda sida loogu baahdo.
Kooxaha Dugsiga Dhexe: Ardayda waxaa loo abaabulaa kooxo heer fasal ah si ardaydu u yeeshaan isla macallimiin. Tani waxay u oggolaaneysaa macallimiintu inay si shaqsiyan ah u bartaan ardayda oo ay si joogto ah ula kulmaan ardaydooda xagga bulshada, shucuurta, iyo fayo-qabka tacliimeed
Xarunta Caafimaadka: Waxay soo dhaweyneysaa dhammaan ardayda / waalidiinta doonaya inay wax ka qabtaan arrimaha la xiriira caafimaadka maskaxda, caafimaadka kiimikada, nafaqada iyo waxbarashada caafimaadka. Waa dadaal wada shaqeyn ah oo ka tarjumaya sida bulshada ay uga go'an tahay inay taageerto wanaagsanaanta dhallinteenna waxaana lagu maalgeliyaa taageerada ballaaran ee hay'adaha maxalliga ah, aasaaska, iyo Degmada 834.
AVID (Hordhaca Qofka Go'aaminta Shaqsiga): AVID waa koorso la xusho oo loogu tala galay ardayda fasalka sideedaad taasoo u abuureysa koox isku faca wanaagsan ardayda isla markaana kobcineysa rajo rajo shaqsiyeed iyadoo loo marayo shaqo adag iyo go'aan qaadasho. Waxay bixisaa taageero xoogan iyo cilaaqaad xoogan oo ardayga / macalinka.
Dhisida Hantida, Yaraynta Khataraha (BARR): Ardayda dugsiga sare waxaa taageera qaab kumeelgaar ah oo ku saleysan caddeyn oo diiradda saareysa ardayda "dhan". BARR wuxuu ka kooban yahay sideed istiraatiijiyad oo ardayda iyo macallimiinta ka caawiya sidii ay u dhisi lahaayeen xiriiro aamin ah, xoog leh, oo aaminaad leh iyadoo sidoo kale la horumarinayo hanti muhiim u ah guusha dugsiga iyo nolosha. Ardaydu waxay ku jiraan koox koox waxayna wadaagaan macallimiin guud.
Akadeemiyada Fasalka 10aad: Waxay siisaa jadwal gaar ah oo loogu talagalay ardayda u baahan taageero dheeraad ah xagga aqriska iyo xirfadaha fulinta shaqada. Kooxo macallimiin ah ayaa si wadajir ah ula shaqeeya ardaydan qayb ka mid ah maalinta.
Waqtiga Jilicsan: Dhammaan ardayda fasalka 9aad waxay lahaan doonaan waqti jilicsan oo maalin gudahooda ah si ay u daba galaan damacyadooda shaqsiyeed, u horumariyaan yoolalka dugsiga sare ka dib, iyo inay helaan dareen ka mid ahaanshaha dugsiga sare. Ujeeddooyinka Flex Time waa: dhisidda xiriirka, sinnaanta tacliimeed, ladnaanta bulshada / shucuurta. Ardaydu waxay la shaqeeyaan u-doodaha qaan-gaarka ah iyo sidoo kale la-taliyahooda si ay u dhisaan qorshe waxbarasho oo shaqsiyeed.
Xiriiriyaha Xiriirka: Dhammaan ardayda fasalka 9aad waxaa lagu soo dhaweynayaa dugsiga sare iyada oo loo marayo barnaamijka kala-guurka. Barnaamijkan waxaa lagu tababaraa lataliyeyaal ka socda fasallada yar-yar iyo kuwa sare ee SAHS si ay u noqdaan Hoggaamiyeyaasha 'Link Crew'. Iyagoo ah kudayasho wanaagsan, waxay lataliyaa kuna hagaan ardayda fasalka 9aad inay yeeshaan ku-meel-gaadh guul leh iyo waayo-aragnimo dugsi sare. Waa barnaamij sanadle ah oo leh afar qaybood: Hanuuninta Dugsiga Sare, Wax-barashada Tacliinta Sare, La-socoshada Bulshada, Xiriirrada Hogaamiyaha Bilowday.
Shaqaalaha Taageerada: La-taliyayaasha Dugsiga, Shaqaalaha Adeegyada Caafimaadka, Cilmi-nafsiyadeedka Dugsiga, Dhakhaatiirta Caafimaadka Maskaxda ee shatiyeysan
Kooxaha Taageerada Ardayda: Kooxaha shaqaalaha taageerada, macallimiinta, iyo maamulka ayaa kulmaya si looga wada hadlo ardeyda bulshada, shucuurta iyo fayoobaanta tacliimeed. Waxay soosaaraan qorshooyin taageero ah ardayda sida loogu baahdo.
AVID (Horumarka loo maro Shakhsiga Go'aaminta): Koorsooyinka la xusho ee AVID waxaa lagu bixiyaa habraac codsi ah dhammaan ardayda fasalada 9-12. AVID waxay ardayda u abuurtaa koox isku faca ah waxayna horumarisaa dareenka rajada laga qabo guul gaar ahaaneed iyadoo loo marayo shaqo adag iyo go'aan qaadasho. Waxay bixisaa taageero xoogan iyo cilaaqaad xoogan oo ardayga / macalinka.
Xirfadaha: Barida xirfadaha bulshada, E-12 tallaabo tallaabo tallaabo ah.
Aagagga Regulation & Manhajka Manhajka & Waqtiga Bulshada 5 Cajaa'ib Leh: Wuxuu bartaa fahamka shucuurta, is-xakamaynta, iyo xirfadaha laqabsashada ee dhammaan ardayda laga soo bilaabo yaraantoodii ilaa fasalka 12aad.
Mindup: Waxay bartaa ardayda istiraatiijiyado kala duwan oo diiradda lagu saarayo feejignaantooda, kor loogu qaado xirfadahooda is-xakamaynta, dhisida u adkeysiga walaaca, iyo horumarinta maskax-dejineed ee iskuulka iyo nolosha labadaba. *
Isku Xidhka Dugsiga: Wuxuu ardayda baraa dugsiga sare ee bulshada, shucuurta, dabeecadaha iyo xirfadaha nolosha si guud looga dhigo nolosha iyo goobta shaqada bulshada iyo waliba qaangaarnimada.
* Barnaamij la aqoonsan yahay oo loo maro CASEL, Wadashaqeynta Tacliinta, Bulshada, Barashada Dareenka
Waxaa laga yaabaa inaad ogtahay in carruurta firfircoon ay yihiin ardayda ka wanaagsan. Waxaad u badan tahay inaad garwaaqsan tahay in waxa carruurteennu cunaan ay saameyn ku leedahay sida ay wax u baranayaan. Laakiin ma ogtahay in caruurta maanta laga rajeynayo inay ku noolaadaan SHAN SANO KA DARAN waalidkood sababtoo ah qaab nololeedka caafimaad darrada ah?
Taasi waa sababta aan ula shaqeyno bulshadeena si aan u xoojino carruurtayada maskaxda iyo jirkeena. Waxaa naga go'an inaan sameyno qaybteena si aan uga caawinno ardaydeena inay noqdaan kuwo caqli badan, faraxsan oo cimri dheer.
Dabaaldegyada Fasallada & Dhalashooyinka
Kordhinta Maskaxda iyo Dhaqdhaqaaqa
Siyaasaddayada Fayo-qabka waxay diiradda saareysaa sameynta waxa aan ognahay inay ugu fiican yihiin carruurta. Waxay ku saabsan tahay:
Carruurta oo dhaqaajiya inta lagu jiro maalinta
Bixinta cunno nafaqo leh, cunto fudud iyo tanaasul
Abuuritaanka jawi nabdoon oo loogu talagalay carruurta qaba xasaasiyadda cuntada daran, xaaladaha caafimaad ama xaddidaadaha kale ee cuntada
Ka-fududaynta firfircoonida iyo caafimaadka dhaafsan maalinta dugsiga
Caawinta abuurista caqli, caruur faraxsan iyo bulshooyin caafimaad qaba.
Ugu dabbaaldegidda maalmaha dhalashada hablo xiiso leh iyo siyaabo xusuus leh oo carruurta ka dhigaya inay dareemayaan qiimo iyo jacayl
In xafladaha gaarka ah ee fasalka dhexdiisa laga dhigo kuwo ammaan ah oo lagu wada raaxaysan karo dhammaantood iyaga oo leh dabaaldegyo hal abuur leh oo aan ku jirin cuntada
Ku abaalmarinta ardayda waxqabadka tacliimeed ama dhaqan wanaagsan oo leh mudnaan gaar ah ama waxqabadyo
La shaqeynta Adeegyada Nafaqada si loo helo ikhtiyaarro caafimaad iyo badbaado leh oo loogu talagalay khibradaha barashada cuntada ee fasalka ku jira
Bixinta ikhtiyaarro badan oo nafaqo leh - sida yogurt parfaits, miraha iyo khudaarta cagaaran, casiirka - joogitaanka tanaasulka
Dhiirrigelinta qaab nololeed caafimaad leh inta lacag la ururinaayo - waxyaabaha sida Fun Walk / Runs ama qoob ka ciyaarka
Maxaa Ka Baxay
U dabaal degga koobabka keega, nacnaca iyo sonkorta xad-dhaafka ah taas oo ka dhigaysa mid adag inay carruurtu xoogga saaraan oo ay wax bartaan
Wax ka qabashada xasaasiyadda cuntada, shuruudaha cuntada iyo xaaladaha caafimaad ee ka hortaagan carruurta qaarkood inay ka qaybgalaan
U dhiibida nacnaca iyo dawooyinka sonkorta leh ee ka dhigaya kuwa ku adag carruurta inay diiradda saaraan fasalka
Keenida cuntada guriga ee loogu talagalay mashaariicda fasalka oo laga yaabo inay kujiraan xasaasiyado ama jirrooyinka cuntada ka dhasha
Keenida oo keliya cabitaannada sonkorta leh, nacnaca iyo buskudka munaasabadaha isboortiga iyo howlaha kale
Iibinta baararka nacnaca, digaagga, cajiinka buskudka iyo cuntooyin kale oo aan caafimaad qabin si lacag loogu helo
Cunnadu waa dariiq muhiim u ah dhaqammo badan oo loogu dabaaldego dhacdooyinka gaarka ah, laakiin ma ogtahay in xafladda fasalka caadiga ah ay ku jiraan illaa 500 kalooriyo dheeraad ah? Aynu diirada ka saarno cuntada oo aan dib ugu dhigno sababta xafladda.
Maalmaha dhalashadu waa fursad muhiim ah oo aan ku aqoonsan karno kuna dabaaldegi karno ardaydeena. Sidoo kale waa fursad lagu caawiyo inay horumariyaan qaab nololeed caafimaad qaba oo hubiya inay haystaan dhalashooyin badan oo farxad leh!
Waxaan dooneynaa in ardaydeena ay dareemaan in la qiimeeyo oo la jecel yahay maalintooda qaaska ah, taasna waxaan ku sameyn karnaa habab badan oo xiiso leh iyo siyaabo xusuus leh oo aan ku lug laheyn daaweynta sonkorta leh. Macallimiinta iskuul kasta waxay ka shaqeynayaan sidii ay u go'aamin lahaayeen sida ugu wanaagsan ee loogu dabaaldego fasalkooda. Waa kuwan talooyin hal abuur leh:
Samee taaj, calaamad ama calaamadee dhalashada dhalashada.
Daar xoogaa muusiko ah oo qoob-ka-ciyaarka!
Ilmuhu ha noqdo kaaliyaha macalinka maalintaas.
Sii waqti gaar ah maamulaha, waalidka ama qof kale oo weyn, sida inay wada qadeeyaan.
Cunugu ha keeno wax si uu tuso una sheego.
U oggolow cunuggu inuu u doorto ciyaar firfircoon fasalka jimicsiga ama nasashada.
U oggolow cunuggu inuu doorto buug oo uu kor ugu akhriyo fasalka. Fasalku ha ka soo baxo muuqaal jimicsi oo xiiso leh.
Ciyaar Simon wuxuu yidhi ama ciyaar kale oo aad jeceshahay.
Cunnadu waa dariiq muhiim u ah dhaqammo badan oo loogu dabaaldego dhacdooyinka gaarka ah, laakiin ma ogtahay in xafladda fasalka caadiga ah ay ku jiraan illaa 500 kalooriyo dheeraad ah? Fiiri fiidiyowga Maalinta Macaan (oo ku saleysan sheeko run ah oo ka socota degmadeena) si aad u aragto inta sonkorta dheeriga ah ee ay ardaydeenu cunaan xilliyada dhacdooyinka gaarka ah.
Waa kuwan fikrado dhowr ah oo ah siyaabo aad ugu dabaaldegi karto cunno la'aan:
Halkii aad nacnac u dhiibi laheyd istiikarka, tattoosyada, caarada caarada leh iyo waxyaabaha kale ee yar yar ee ay ku ciyaaraan.
Samee tartan dhoolatus ah ama dharka.
Samee Monster Mash ama sii waqti dheeri ah oo ciyaarta ah maalintii oo dhan.
Samee mashruuc adeeg fasal ah (aruurinta cuntada loogu talagalay Dooxada Dooxada).
Abuur garland mahadnaq ah adoo adeegsanaya caleemo waraaqo ah oo ay kujiraan qoraalo gacmeed.
Samee kuwa shumaca shumaca haya.
Ku qurxin fasalka baraf iyo baraf.
Dunida barafka ka samee dhalooyinka cuntada ilmaha.
Sii wad barafka ama barafka.
Abuur kaarka haysta Valentine.
Ardaydu ha qorto faallooyin wanaagsan oo ku saabsan ardayda ay isku fasalka yihiin oo ha u dhaafiyaan.
Samee kaararka salaan si aad u siiso dadka deggan guryaha daryeelka.
Fasalka safarka fasalka
Xoogaa dhaqdhaqaaq iyo jimicsi ah ayaa waddo dheer u mari kara gacan ka geysashada kor u qaadida awoodda maskaxda ardayga. Daraasaduhu waxay muujinayaan in ardayda firfircoon ay dhab ahaantii leeyihiin maskax weyn - gaar ahaan hal qayb, ganglia basal, oo ka caawisa inay fiiro gaar ah yeeshaan.
Firfircoonidu waxay sidoo kale hagaajin kartaa awoodda cunugga ee xallinta dhibaatooyinka murugsan. Waa kuwan qaabab aan carruurta uga kaxaysanno fasalka dhexdiisa si ay diiradda u saaraan waxbarashada. Waxaan u adeegsannaa fiidiyowyo, ciyaaro iyo waxqabadyo si aan ugu dhiirrigelinno carruurta inay dhaqaaqaan oo u tababaraan daqiiqado feker ah Fiiri boggagaan: